Wararka Maanta: Talaado, Sept 18, 2012-Kenya oo sheegtay in Ciidamadeeda iyo kuwa Soomaaliya ay ku dhow yihiin Magaalo Xeebeedda Kismaayo
"Al-shabaab waxay ku jirtaa marxaladdii ugu dambeysay," ayuu yiri afhayeenka ciidamada Kenya, Cyrus Oguna oo saxaafadda kula hadlay Nairobi, isagoo intaas ku daray in ciidamadooda iyo kuwa dowladda Soomaaliya ay ku sugan yihiin deegaanka Janaay-Cabdalla oo Kismaayo kaga beegan dhinaca waqooyi-galbeed.
"Weerarrada lagu qaadayo Kismaayo waa kuwo dhinaca cirka, badda iyo dhulkaba ka socda," ayuu yiri Oguna oo hadalkiisa raaciyay. "Ma sheegin karo xilli go'an oo aan Kismaayo ku galayno, balse waxaan sheegi karaan oo keliya inay dhow dahay."
"Culeyska saaran waxaa lagu garan karaan iyagoo dambiyay idaacaddii afkooda ku hadli jirtay ee Andulus," ayuu yiri Oguna oo hadalkiisa daba-dhigay. "Al-shabaab waxay sameynayeen wax walba oo ay awoodaan si ay ciidamadeeda uga hortagaan, xitaa waxyaabaha qarxa ayay waddooyinka ku aaseen. Laakiin taasi ma noqon wax na celiya."
Hay'adda qoxootiga adduunka ee UNCHR ayaa sheegtay maanta oo Salaaso ah in dad aad u fara badan ay ka barakacayaan Kismaayo, iyadoo sheegtay inay hayso qiysaasta 4,400 qof oo ka baxay degmadaas si ay uga nabadgalaan colaadaaha kusoo wajahan.
"Waxaan shacabka weydiisannay --- ma ahan Kismaayo oo keliya, laakiin goob kasta oo ay dhici karto in lagu dagaalamo inay isaga tagaan, taasoo macnaheedu yahay inaysan dagaalladaas dhibaato kasoo gaarin," ayuu yiri Cyrus Oguna oo kula hadlayay wariyeyaasha Nairobi.